यस्तो ठाउँ जहाँ श्रीमती साटेर मात्रै यौनसम्पर्क गरिन्छ! - TESTING NEWS
Home / Interesting affair / यस्तो ठाउँ जहाँ श्रीमती साटेर मात्रै यौनसम्पर्क गरिन्छ!
यस्तो ठाउँ जहाँ श्रीमती साटेर मात्रै यौनसम्पर्क गरिन्छ!
एजेन्सी । अहिलेको युगमा विश्वमा अनौठा अनौठा घटना सुन्न पाइन्छ । जसलाई कलियुग भन्ने गरिन्छ ।
हाम्रो समाजले सोच्नै नसक्नेगरी यहाँका दम्पत्तिले श्रीमती साटेर यौनसम्पर्क गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । आफ्नी श्रीमतीलाई परपुरुषसँग र परपुरुषकी श्रीमती वा गर्लफेण्डसँग आफूले यौनसम्पर्क राख्ने गरेको घटना समाचारमार्फत बाहिर आएको हो ।
घटना छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको हो । उत्तर प्रदेशबाट श्रीमती सीता (नाम परिवर्तन)लाई दिल्ली लगेर श्रीमान हरि (नाम परिवर्तन)ले आफ्ना साथी अमर(नाम परिवर्तन)सँग यौनसम्पर्क गर्न लगाएका छन् भने साथीकी गर्लफ्रेण्ड निशा (नाम परिवर्तन)सँग आफूले यौनसम्पर्क राखेको भारतीय पत्रिका दैनिक जागरण को अनलाईनले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।